Fialantsasatra amoron-dranomasina " Journey-Assist - tora-pasika tsara indrindra eto an-tany. fialam-boly
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Beach holidays
Tsy isalasalana fialan-tsasatra ny fialantsasatra miala sasatra indrindra eto an-tany! Ahosiho ambanin'ny feon'ny onja-filentehana ny masoandro, mifoka rivotra mangatsiaka be…. Inona no mety ho tsara kokoa? Tsy misy na inona na inona :). Ary, raha ny marina, ity zava-misy ity dia voamarin'ny statistikan'izao tontolo izao. Satria fialan-tsasatra amoron-dranomasina izay takiana amin'ny avo indrindra tsy misy toa azy noho ny karazana fialantsasatra hafa! Ka ny morontsiraka tsara indrindra eto an-tany no miandry anao! 😉
Zava-dehibe ny mahatakatra fa tsy misy tora-pasika roa mitovy eto amin'izao tontolo izao ary samy manam-paharoa sy tsara tarehy amin'ny fomba samy irery ny tsirairay avy, izay manokatra fahafahana tsy misy fetra ho an'ireo tia ny fety amoron-dranomasina!
Hafa be ny torapasika:
Torapasika misy harambato
Ny torapasika vato dia misy torapasika izay misy ny fidirana amin'ny ranomasina ahitana vato, izay matetika rakotra fotaka, ka mahatonga azy ireo ho malama sy mampidi-doza. Tsy azo tanterahina ireo torapasika ireo
ho an'ny fialantsasatra amin'ny spa. Midina avy eny amin'ny torapasika vato mampiasa tohatra sy zana-tohatra.
Tsy mahazatra sy tena tsara tarehy ny tontolon'ny torapasika toy izany, satria matetika misy tendrombohitra na hantsana manodidina ny morontsiraka be vato. Ary koa, ny mampiavaka ny morontsiraka be vato dia rano madio, izay tsara ho azy manafosafo sy manafaka
Ny karazana tora-pasika faran'izay kely indrindra, izay misy ny fasika sy manasa ny akorandriaka kely. Indrisy anefa,
dia mora ny mandratra ny tenanao eo amin'ny sisin'ny akorandriaka, ka mila mitandrina amin'ny torapasika toy izany ianao.
Ny tena, angamba, ny lehibe indrindra sy mahaliana indrindra, ho an'ireo mpankafy ny haza amoron-dranomasina, amoron-dranomasina Shell Beach, any andrefana Aostralia... Mirefy 120 km izy ary rakotra akorandriaka hatrany amin'ny 10 metatra ny morontsiraka iray manontolo. fa Sanibel Island, Florida, United States, tendrena tsy tapaka ho toerana tsara indrindra hahitana akorany mahaliana indrindra.
Ny torapasika toy izany dia misy vato boribory kely, mahatratra hatramin'ny 10 cm ny halavany
vatokely kely sy vatokely lehibe. Ny moron-dranomasina potipoti-tena ahazoana aina izay heverina ho morontsiraka miaraka
vatokely tsy lehibe noho ny vary. Ary toa ny tora-pasika vatolampy, ny torapasika oram-borona dia asiana rano madio sy mazava, izay tsara ho azy indray manafosafo sy manafaka.
Ary ny malaza indrindra tora-pasika eo amin'ireo mpangataka - Sand... Rehefa dinihina tokoa, ny fasika dia marefo sy mora zaka. Ary mety tsara amin'ny fialan-tsasatra tena izy io. Mandritra izany fotoana izany, ny morontsirika fasika dia tsy mitovy amin'ny endrika sy ny atiny.
Ekena ho morontsiraka fasika manintona sy manintona indrindra no misy fasika fotsy. Ny fampifangaroana ny quartz fotsy na ny haran-dranomasina ary ny rano turquoise marefo dia tsy mampino! :). Ny fasika toy izany dia miavaka amin'ny karazam-pasika kely (0,1 - 0,2 mm), ary ny loko fotsy mamirapiratra. Ny morontsiraka toy izany dia matetika no hita amin'ny dokam-barotra isan-karazany amin'ny fahafinaretana avy any an-danitra :). Ary ireo morontsiraka ireo no tena tian'ny ankamaroan'ny mpitia amoron-dranomasina.
Sandy amoron-dranomasina tonga amin'ny loko isan-karazany:
Torapasika volamena mavo (izy ireo no be dia be indrindra eto ambonin'ny planeta)
Torapasika miaraka fasika fotsy
Tsy mampino torapasika mainty miaraka amin'ny basalt (volkano volkano
Ary azo antoka ihany koa torapasika exotic miaraka amin'ny mavokely, Lilac, mena ary eny koa ny Green Sand 🙂
Ny torapasika fasika tsara indrindra!
Torapasika fotsy tsy hita isa ao Maldives.
Fasika madio, rano azure, ny sary mahafinaritra indrindra eto an-tany! Haran-dranomasina, farihy manga be dia be, mora idirana amin'ny ranomasina, zavamaniry tropikaly tsy mampino, Maldives daholo ireo! Ary izany rehetra izany dia misy mandritra ny taona, mahafinaritra ny toetr'andro eto mandavantaona! Ny mari-pana amin'ny rivotra +29 .. 32 ° C;
Rano +27 .. 29 ° C.
Ny moron-dranomasina dia miorina amoron'ny nosy coral maro ary ireo no mpizahatany lehibe eto amin'ity firenena ity. Izy ireo dia mety amin'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina miala sasatra ary amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny rano. Fampahalalana bebe kokoa momba ny fialantsasatra any Maldives eto.
Asia. Ranomasimbe Indianina
Siesta Key, Florida, Etazonia
Tora-pasika mahafinaritra miaraka amin'ny fasika quartz fotsy, rano azure. Toy ny morontsiraka rehetra any Etazonia, dia misy fitaovana ilainao rehetra - fijanonana, fidiovana, fandroana rano madio, faritra fialamboly ary barbecue. Misy mihitsy aza ny kianja filalaovana misy sary mihetsiketsika sy savily ataon'ny ankizy isan-karazany. Ny masoandro mody tsara tarehy dia azo jerena avy eny amoron-dranomasina. Tamin'ny 2011 dia nomena anarana ho morontsiraka tsara indrindra any Amerika izy io.
Làlana amoron-dranomasina midadasika, malefaka sy fanamiana fidirana mankamin'ny ranomasina. Mety ho an'ny fianakaviana manan-janaka. Amin'ny lafiny ratsy, malaza be ny moron-dranomasina, ary tsara kokoa ny tonga aloha raha te hanana fotoana hipetrahana ianao.
Adiresy - 948 Beach Road, Siesta Key, FL 34242-2174
Pantai Pensacola, Florida, Etazonia.
Ny morontsiraka fasika fotsy mangatsiaka tsy misy farany, atambatra amin'ny rano amoroma amin'ny Helodrano Mexico, dia mamorona toerana mety indrindra amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina miala sasatra. Any amin'ny nosy Santa Rosa. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny volana aprily ka hatramin'ny oktobra.
Ny morontsiraka dia manana ny zava-drehetra ilaina amin'ny fianakaviana mahazo aina na fialan-tsasatra tsy miankina. Mila miomana amin'ny zava-misy ianao fa hisy olona maro.
Indraindray ireo sakana no hita ao anaty fasika. Miaro ny sokatra mametaka atody izy ireo.
Adiresy - Florida 32561. Telefon-telefaona: (850) 346-6525. Santa nitsangana
Lopes Mendes Beach, Ilya Grand, Rio de Janeiro State, Brezila
Paradisa tropikaly! Torapasika telo kilometatra misy fasika fotsy, rano turkise mazava ary izany rehetra izany dia voahodidin'ny ala mikitroka izay tsy misy lalana iray akory. Amin'ny rano ihany no ahafahanao mankany amin'ny nosy. Adiny iray amin'ny sambo, ary avy eo mamaky ny ala mandritra ny antsasak'adiny mankany amin'ny morontsiraka. Fa mendrika izany! Ity morontsiraka ity no valiny tsara indrindra ho an'ireo tia mandeha. Ary koa, filentehan'ny masoandro mahafinaritra no hita avy eto.
Semi-wild ny morontsiraka. Tsy misy fandriana masoandro, tsy misy elo. Fa misy ny mpamonjy voina. Noho ny tsy fahazoana azy io dia tsy dia mampahazo aina azy manokana ho an'ny fianakaviana manan-janaka kely. Toerana mahafinaritra ho an'ny surf. Matetika ny onja dia mety aminy fotsiny.
Ilya Grand, State of Rio de Janeiro, Brezila
Anse Lazio (Anse Lazio), nosy Praslin. Seychelles.
Rano mazava tsara turquoise, fasika fotsy amin'ny helodrano mahafinaritra sy milamina. Mendrika ekena ho iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eran'izao tontolo izao! Sehatra mahafinaritra. Ranon'ny turquoise rehetra. Ny morontsiraka dia manana ny zavatra rehetra ilainao. Fijanonana, kafe, fandroana, fidiovana. Eo akaiky eo dia misy vala ho an'ny sokatra lehibe an-tanety.
Ity tora-pasika ity dia misy snorkeling lehibe. Fahitana eo ambany rano 20-30m.
Amin'ireo minus dia malaza ny moron-dranomasina, midika izany fa feno olona. Tsy misy fitsangatsanganana masoandro. Tsy azon'ny fitateram-bahoaka ny torapasika.
nosy Praslin. Seychelles.
Beach Grand Anse, La Digue Island Seychelles
Ny hantsana mahatalanjona sy mahafinaritra, morontsiraka mahafinaritra, ranomasina ary zavamaniry maitso dia manome fiadanam-po ary milentika amin'ny fialan-tsasatra feno fisaintsainana. Misy trano fisakafoanana. Ny morontsiraka dia mety amin'ny filentehan'ny masoandro rehefa mankafy ny ranomasina misosa ianao.
Ny fatiantoka dia alokaloka kely, ary saika onja avo foana. Ary koa, tsy misy fandroana sy trano fidiovana. Tsy dia mety loatra amin'ny fianakaviana manan-janaka kely. Afaka mandeha any amoron-dranomasina an-tongotra ianao, na bisikileta, na bisikileta.
nosy La Digue Seychelles
Bay Rendezvous, nosy Anguilla, Karaiba
Misy morona 365 marina any amin'ny nosy Anguilla, amin'ny isan'ny andro ao anatin'ny herintaona, ary ny tora-pasika rendezvous dia ekena ho tsara indrindra amin'izy ireo.
Tora-pasika mitokana tsara tarehy, izay tsy azon'ny sambo ihany, na SUV, izay tokony ho entin'ny ace tena izy :). Eto amin'ity morontsiraka ity ianao dia azo antoka fa fialan-tsasatra avy amin'ireo mpizahatany, tantaram-pitiavana ary andian'omby hermit :) Toerana tsara koa izy io snorkelling. Mazava ny rano, ary hafa velona ny fiainana an-dranomasina.
Sandy ground Anguilla, Ranomasina Karaiba.
Beach Playa Paraiso, Cayo Largo, Kiobà
Playa Paraiso Beach, izay nadika ho torapasika paradisa, ary tsy very maina ny hananana anarana toy izany! Ny toerana mahafinaritra, toetrandro mahafinaritra mandritra ny taona, haingo, manankarena, rano madio sy rano fasika sy ranomandry fotsy, milentika moramora, zaridaina mahafinaritra no nahatonga ity paradisa ity ho toerana mahafinaritra ho an'ireo tia ny fialantsasatra amoron-dranomasina.
Any amoron-dranomasina dia misy lakilen'ny masoandro, elo, trano fisakafoanana. Mety misy vehivavy mpizahatany mpizahatany manana akanjo topless akanjo, izay midika fa eo amoron-dranomasina dia mety tsy mahazo aina miala voly miaraka amin'ny ankizy.
Cayo Largo Kiobà
Matira Beach, Nosy Bora Bora, Polinezia frantsay
Ny nosy Bora Bora dia iray amin'ireo nosy 118 any Polynesia frantsay, heverina ho iray amin'ireo zokram-pitiavana indrindra eran'izao tontolo izao! Sambo miorina eo afovoany amin'ny rano mazava turquoise no mampanantena ny fialantsasatra paradisa an-tsokosoko tanteraka.
Tsara ity toerana ity ihany koa snorkelling и freediving.
Morontsiraka Matira, tonga lafatra amin'ny fialantsasatra amoron-tsiraka. Izy io dia 3km amin'ny morontsiraka fasika madio. Ny tora-pasika dia manana izay ilainao rehetra hijanonana moramora, ary koa ny trano fisakafoanana sy ny fivarotana. Koa satria io irery no tora-pasika ofisin'ny nosy, dia matetika miaraka amin'ireo mpizahatany.
Nosy Bora Bora, Polinezia frantsay
Rabbit Beach, Nosy Lampedusa, Italia
Ny Nosy Lampetuza dia eo anelanelan'ny morontsirak'i Malta sy Tonizia. Mahavariana ny fasika amoron-dranomasina an'ny Rabbit amoron-dranomasina italiana! Plus rano turquoise mazava kristaly, ary eto izy, fomba fahandro tsotra ho an'ny fialantsasatra amoron-dranomasina tsara indrindra :). Marihina fa tamin'ny taona 2013 ity amoron-dranomasina ity dia nekena ho ny tsara indrindra eran-tany raha ny TripAdvisor .
Tokony hampatsiahivina fa tsy haingam-pandeha mora mankany amin'ny torapasika, ary mety hisy olona marobe eto mandritra ny vanim-potoana fara tampony.
Nosy Lampedusa Italia
White Beach, Nosy Boracay, Filipina
White Beach ao amin'ny nosy Boracay, izay fasika fotsy sy rano madio tsy mamela tsy hiraharaha an'ireo mpitia amoron-dranomasina, dia tsy afaka niditra tamin'io lisitra io. Ary koa, ity toerana ity dia tsy mamela tsy miraharaha sy tia snorkelling!
Ity morontsiraka ity dia fanehoana velona ny fahasoavana :). Fasika fotsy fito kilometatra, tsara toy ny lafarinina, ranomasina turquoise ary hazo palmie be dia be. Ny lemaka tena malefaka mankany anaty rano, izay mety indrindra ho an'ireo mpizahatany manan-janaka, filentehan'ny masoandro mahafinaritra, ary fotodrafitrasa amoron-dranomasina feno - kafe, trano fisakafoanana, trano fanorana ary maro hafa. Amin'ireo minus dia azo totofana amin'ny vanim-potoana avo indrindra, indrindra ny amin'ny filentehan'ny masoandro. Rehefa dinihina tokoa, dia mahavariana ny filentehan'ny masoandro!
Nosy Boracay Filipina
Hyams Beach, Aostralia
Hyams Beach Iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eto an-tany! Ny fasika amoron-dranomasina ity dia voatanisa ao amin'ny Guinness Book of Records ho fasika fotsy sy madio indrindra eto an-tany! Mandritra izany fotoana izany dia kely tsy mampino izy ary toy ny lafarinina ihany :). Alao an-tsaina fotsiny hoe mahafinaritra ny mikasika fasika toy izany :). Ary fantatrao ve ny mahatalanjona? Madio ity morontsiraka ity, tsy hoe diovina izy, fa satria tsy fako!
Inona koa no azonao lazaina momba ny tora-pasika ity? mila mankany ianao! Tsy afaka mamaritra ny teny :). Io tora-pasika io dia tsy mamela olona tsy ho afa-bela!
Toy ny fitsipika, ny fasika mainty dia vokatry ny fiasan'ny volkano. Ny magma an'ny volkano, raha vantany vao mangatsiaka, dia miadana ary azo antoka fa soloin'ny ranomasina amin'ny sombina fasika, ary manasa ity fasika ity ho eny amoron-dranomasina. Toy izao no niforonan'ny torapasika mainty toy izany. Mampiseho mazava ny fomba ny morontsiraka fotsy fotsy teo amin'ny nosy ny sary Balimivadika mainty.
Ny tora-pasika mainty malaza indrindra:
Beach Punaluu, Hawaii, United States.
Vik Beach, Islandy.
Amoron-dranomasina Muriwai, Auckland, New Zealand.
Torapasika sasany ao amin'ny nosy Bali, Indonezia, miaraka amin'ny fasika mainty koa.
Tora-pasika misy fasika miloko!
Ary misy ny torapasika TANDROSO.
Ohatra, Elafonisi, Gresy. toerana mahafinaritra sy tsy mahazatra. Psombin-akorandriaka sy haran-doko manome loko fasika amin'ny fasika. Mahafinaritra ny torapasika tsara tarehy ny Horseshoe Bay, Bermuda - fitambarana rano manga sy fasika mavokely.
Tsy azo atao ny mijanona tsy mandeha amin'ny saina amoron-dranomasina RED SAND.
Kokkini Paralia, Santorini, Gresy
Ny fasika mena sy ny vatolampy mena ao amin'ilay nosy dia nahazo loko tsy mahazatra toy izany avy amin'ny vovo-mena mena tafiditra ao amin'ny famolavolana azy ireo.
Misy aza ny morontsiraka misy Fasika MAITRE
Papakolea Beach, Hawaii, United States
Ny crystals of chrysolite (semiprecious vato) dia manome ny fasika miloko maitso sankated mahafinaritra.
Torapasika miaraka LILAC SAND
Pfeiffer Beach, Kalifornia, United States - Ny loko volomparasy fasika dia azo vokatry ny famerenan'ny tara-pahazavana ny masoandro amin'ny ampahany kely indrindra amin'ny spessartine mineraly, izay misy manganese sy firaka.
Ary mazava ho azy, ny tora-pasika miaraka amin'ny mahazatra indrindra FIVORIANA ENY AN-TRANO